Ọkara voltaji na High Voltage Switchgears, China Ọkara voltaji na High Voltage Switchgears Nsuputa, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Ọkara voltaji na elu voltaji Switchgears
>lọ>Onye na-eweta ngwaahịa>Ngwa igwe na igwe eletrik zuru oke>Ọkara voltaji na elu voltaji Switchgears
A na-ejikarị ụdị akụrụngwa zuru oke nke voltaji maka njikwa na nchebe nke sistemu ike (gụnyere ụlọ ọrụ ọkụ, ọdụ ụgbọ ala, ahịrị nnyefe na nkesa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke Ngwuputa na ndị ọrụ ndị ọzọ). Enwere ike itinye akụkụ nke akụrụngwa ma ọ bụ ahịrị n'ime ma ọ bụ kwụsị ọrụ dịka mkpa nke ọrụ grid si dị, ma ọ bụ enwere ike iji ya mee ihe mgbe akụrụngwa ma ọ bụ ahịrị daa, a na-ewepụ akụkụ ahụ na-adịghị mma ngwa ngwa na grid ọkụ, ka ọ bụrụ hụ na arụ ọrụ nkịtị nke akụkụ na-enweghị ntụpọ nke grid ike na nchekwa nke akụrụngwa na ọrụ na ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
A na-eji ngwa ọrụ zuru oke nke dị ala na-arụ ọrụ na nkesa ike, ụgbọala eletrik na ngwa njikwa akpaaka nke usoro obere voltaji na ụlọ ọrụ ọkụ.
Ngwaahịa usoro na-eji nchikota ngalaba nhazi dị ka ntọala ntọala. A na-eji kposara edozi ihe nhazi niile. Mgbe emechara usoro ntọala ahụ, a na-edozi ọnụ ụzọ, baffle, clapboard, drawer, bracket bracket, busbar na eletriki dị ka achọrọ iji mejupụta ngwa ọkụ zuru oke;
Usoro a na-eji ngalaba akpọrepu. Debere ya site na bọọdụ akụkụ atọ, ma jikọta ya na bolt, na-enweghị usoro ịgbado ọkụ, iji zere nrụrụ ịgbado ọkụ na nrụgide ma melite nrụnye nrụnye;
All esịtidem Ọdịdị na-galvanized, mpụga Ọdịdị na-fesa na static epoxy ntụ ntụ mgbe pickling na phosphating mesoo;
Maka ime ụlọ, ịdị elu nke iji saịtị ≤ 2000m (n'elu nke a nwere ike ịkwado);
Iru mmiri dị n'etiti ekwesịghị gafere 50% na +40 ℃, ebe na obere okpomọkụ, a na-anabata iru mmiri ka ukwuu, dịka 90% na +20 ℃. N'ịtụle mgbanwe nke okpomọkụ nwere ike mgbe ụfọdụ na-akpata condensation, nkezi kwa ụbọchị kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 95% na nkezi kwa ọnwa na-erughị 90%.